Imizekelo yeemenyu zokutyela | Creatives Online
Ngaba unayo iprojekthi yokwenza imenyu yevenkile yokutyela? Mhlawumbi unjalo Ngaba ujonge iingcebiso zokubonisa imenyu yakho kwaye wothuse iindwendwe zakho kwiinkcukacha zokuqala? Nokuba yeyiphi na indlela, uyafuna imizekelo yeemenyu zokutyela. Kwaye singakunceda.
Kwaye kukuba, kholwa okanye hayi, imenyu yevenkile yokutyela yenye yezona nkcukacha zibalulekileyo, kwaye uninzi lwabantu aluhoyi xa beqala ishishini labo. Ke ukuba oko kuyenzeka kuwe, siya kuthetha nawe kwaye sikunike imizekelo.
1 Kutheni imenyu yokutyela ibaluleke kangaka
2 Iingcebiso zangaphambili zokwenza uyilo lwemenyu yokutyela elungileyo
3 Imizekelo yeemenyu zokutyela
3.1 Imenyu yemenyu yeendawo zokutyela kwi-3D
3.2 Iseti yemenyu
3.3 Isakhelo sevenkile yekofu
3.4 Incwadana yemenyu
3.5 Ilaphu letafile yemenyu
4 Uzenza njani iimenyu zokutyela
Kutheni imenyu yokutyela ibaluleke kangaka
Khawucinge ukuba uya kwiindawo zokutyela ezimbini ezahlukeneyo. Zombini zinexabiso elifanayo, kwaye ziyindlela enye. Nangona kunjalo, xa ufika kwenye bakunika uluhlu olusisiseko lwezinto abanazo ngokungathi luluhlu olunamaxabiso abo. Kwelinye icala, enye inikezela kuwe ihlelwe ngokwezitya, ngokukhethwa kwegourmet kwaye ikwaqaqambisa ezona izitya zabo ngeefoto. Xa uthi krwaqu nje, ungathanda ntoni ngakumbi kwesi sesibini?
Un imenyu yokutyela inceda ukuthengisa ngakumbiNgenxa yokuba wenza ukuba umntu "athande" oko akubonayo kwaye unokwenza ukuba adle ngakumbi, ekugqibeleni kuya kuba nenzuzo kakhulu kuwe.
Ngokwesiqhelo, amakhadi emenyu ahlaziywa kanye ngonyaka, rhoqo ekuqaleni konyaka, kwaye zigcinwe kuzo zonke iinyanga ezilandelayo (ngaphandle kokuba kukho utshintsho okanye banemenyu eyahlukileyo ngokuxhomekeke kwixesha okanye ukuqinisa umfanekiso wabo). Yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuba nemizekelo emininzi yeemenyu zokutyela, ukuze ukwazi ukuzitshintsha xa zifuneka ngaphandle kokuba uqale ukusuka ekuqaleni.
Ngoku kutheni zibalulekile nje? Kungenxa yokuba benza umfanekiso omhle? Hayi ncma. Kungenxa yokuba kunye nabo unokugqamisa izitya zakho ezilungileyo, kunye nemifanekiso enemifanekiso; okanye ubeke imenyu ngendlela yoqobo enceda isidlo sangokuhlwa ukuba sivakalelwe kukuba ukwindawo yokutyela eyahlukileyo kunaleyo ebeye kuyo ngaloo mzuzu.
Ngamanye amazwi, sithetha ngokwahlukana ngaxeshanye njengobungcali emsebenzini olungileyo.
Iingcebiso zangaphambili zokwenza uyilo lwemenyu yokutyela elungileyo
Ngaphambi kokuba uqhubele phambili ndikunike imizekelo yemenyu yokutyela Sifuna ukukushiyela iingcebiso ekufuneka uzigcine engqondweni, hayi ukukhetha iitemplates kuphela, kodwa naxa unikezela ngolwazi lwendawo yokutyela.
Kwaye, enye yeengcebiso ezilungileyo kukuhlala ubeka phezulu, kwaye kumaphepha angaqhelekanga, izitya ezinenzuzo kakhulu. Zintoni ezo? Ewe, ezo zikuzisela inzuzo eyongezelelekileyo (mhlawumbi ngenxa yokuba azifuni izithako, okanye ngenxa yokuba zenziwe ngemathiriyeli ekrwada engabizi kakhulu). Ngale ndlela uqinisekisa ukuba yinto yokuqala abayibonayo.
Kwakhona, izitya "zinkwenkwezi" kufuneka zize neefoto ukuze "zingene ngamehlo" yaye abantu bakhangele phambili koko bakubonileyo nendlela ekhangeleke kakuhle ngayo.
Ukusebenzisa amakhadi emenyu yoqobo lelinye icebiso. Ulibale ngezomthonyama kwaye ubheje kwezinye zale mihla, ezinje ngobuhle okanye isimbo sabantwana sokufa kwabancinci (into engenazo iindawo zokutyela ezininzi kwaye inokuba yindlela yokuzahlula kukhuphiswano lwakho).
Kwaye ngoku siza kubona imizekelo yeemenyu zokutyela. Kwezi sele sikunike zona, eyokunqanda ukufa, nokuba yeyabantu abadala okanye eyeyabantwana, singongeza oku kulandelayo:
Imenyu yemenyu yeendawo zokutyela kwi-3D
Ukuthathela ingqalelo ukuba ngalo lonke ixesha i-3D ikhona kubomi bethu bemihla ngemihla, kulo mzekelo bekungayi kuba yinto engafanelekanga ukuyisebenzisa kwimenyu yokutyela.
Ayincedi kuphela izidlo zichukumise imenyu kwaye imvakalelo yokuchukumisa iyasebenza, kodwa ikwaphembelela ukuba baya kuyijonga le leta ngakumbi kwaye banokucela okungakumbi.
Kule meko sikunika umzekelo wetemplate eyenziwe kwangaphambili apho unokufumana khona iifayile ezine zePSD kunye nenye i-AI ezine apho guqula kancinane konke okubhaliweyo kunye nemifanekiso ngemenyu enikeziweyo.
Ewe, ayisimahla ngaphandle kokuba kukho unikezelo ngexesha ufikelela kwi unxibelelwano.
Isakhelo sevenkile yekofu
Nangona phantse sihlala sicinga ngemenyu kwaye siyinxulumanise ngokuzenzekelayo kwindawo yokutyela, isenokuba yinto yokuba Indawo yokutyela ebonelela ngesidlo sakusasa se-posh kunye ne-snacks. Kwaye ke, kufuneka uyenze ibe ntle.
Ke apha unalo mzekelo apho usikhumbuza kancinane uyilo lwamandulo kwaye, kwangaxeshanye, lwanamhlanje.
Njengoko usazi, kwiindawo zokutyela ezininzi kuqhelekile imenyu iboniswe kwiphepha elipheleleyo, ngaphambili nangasemva, kodwa endaweni yokuba bakunike ngolo hlobo, bayijika ibe yitriptych.
Kwaye apha une template apho unokufumana khona uyilo oluhle ngokuhlela iifayile.
Ilaphu letafile yemenyu
Ngaba unokucinga ukuba bakubeka ilaphu letafile kwaye oku kube likhadi lemenyu? Ewe, ewe, akusiyo ingcamango yokuqala, kuba siyazi ukuba kukho iindawo zokutyela, ngokukodwa ukutya okukhawulezayo, okuyisebenzisayo, kodwa kunokuba nomdla kulolo hlobo lokutyela okanye kulabo banamhlanje.
Uzenza njani iimenyu zokutyela
Ngokuqinisekileyo ezinye zezo sikuxelele ukuba uzithandile, akunjalo? Ewe, kuya kufuneka wazi ukuba zininzi iitemplates zemenyu yokutyela onokuzisebenzisa, zombini simahla kwaye zihlawulwe. Ezi ziphawulwa ngokubonisa uyilo ngaphandle kokuqala ukusuka ekuqaleni. Konke okufuneka ukwenze kukongeza ulwazi kunye nemifanekiso oyikhethayo, wenze yonke into ibe ntle kwaye uyiprinte kwindawo yakho yokutyela.
Ukongeza kwiitemplates onokuzifumana kwi-Intanethi, kwakhona Ungasebenzisa iCanva, njengoko inezinto ezininzi ezinxulumene nemenyu yokutyela, kunye neAdobe Spark Nangona ingenasixa esikhulu, ungayenza ngokulula eyakho ngokulandela amanyathelo abakunika wona.
Ngoku uyazi ukuba ulenza njani ikhadi lemenyu kwaye unemizekelo yeemenyu zokutyela, kufuneka unikezele ixesha elincinci lokufumana iitemplates ezilungele ishishini lakho, okanye iprojekthi onayo kwaye uyibonise kumxhasi wakho. Oku kuya kongela ixesha kwaye unokwenza uhlengahlengiso ukwenza eyakho ileta ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imizekelo yeemenyu zokutyela
Uyicupha njani i-GIF